စိတ် မကောင်းစရာပါ။ မိန်းကလေးများ အထူး သတိ ရှိကြပါ … – Let Pan Daily
စိတ် မကောင်းစရာပါ။ မိန်းကလေးများ အထူး သတိ ရှိကြပါ …
ရာသီ လာချိန် အစစ အရာရာ ဂရုစိုက်ပါ
ရာသီလာ ချိန်ခေါင်း မလျှော် ပါနဲ့ ရာသီလာချိန် ရေခဲရေ လုံးဝ မသုံးပါနဲ့
ငရုပ်သီး အစပ် လုံးဝမစား ပါနဲ့. ရာသီသွေး သည် 3ရက်တိတိ သူ့အစဉ်လာတိုင်း လာပါတယ်
အစပ် စားလျှင် ပုံမှန်ထက် သွေး ပိုဆင်းသည်
ရာသီ လာခါနီး ရေချိူးခေါင်းလျှော် ဆင်ခြင်ကြပါ မိန်းကလေးများ
ရာသီလာချိန်မှာ မလုပ် သင့်တဲ့ အရာတွေ၊ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေရှိပါ တယ်။ မကြာသေးမီက လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ ရှောင်ရမယ့် အချက်တွေကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာ ဆိုရင် ပုံမှန်အချိန်တွေထက် အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းေ လျာ့နည်းနေတက်ပါတယ်။ရှောင်ရမယ့် အချက်တွေ ကတော့…
အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာ စိတ်တိုလွယ်၊ စိတ်ဆတ်လွယ်နေတာကြောင့် အဲ့ဒီလို အချိ န်တွေမှာ တတ်နိုင်သမျှ စကားပြောဆင်ခြင်ပါ။မိသားစု၊ကိုယ့်ရဲ့ ပါတာနာ ကို တစ်ယောက်တည်းအေးအေးနေ ချင်ကြောင်း ပြောပြထားပါ။ လမ်းလျှောက်တာ တို့၊စာအုပ်ဖတ်နေတာတို့ လုပ်ပါ။
ဒီလိုအချိန်မှာ ငန်တဲ့ Snacks တွေ ဥပမာ-အငန်ပါတဲ့ အာလူးချောင်းကြော် လို အရာတွေကိုရှောင်ပါ။ရာသီလာနေတဲ့ အချိန်မှာ အငန်ပါတဲ့ အစားအစာတွေကို လုံးဝရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Snacks လိုအရာတွေကို စားမယ့်အစား သစ်သီး၊အသီးအရွက်အစရှိတာတွေကို စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ Minerals(သတ္တုဓါတ်)နဲ့ဗီတာမင်တွေကို သစ်သီးဝလံနဲ့အသီး အရွက်တွေကသာ ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။
(၃)Pad ထုပ်ကို (၃)နာရီ(သို့)(၄)နာရီ တစ်ခါလဲပါ
အိမ်မှာပဲဖြစ်စေ၊အလုပ်မှာပဲဖြစ်စေ ဘယ်နေရာပဲ ရောက်နေနေ Pad ထုပ်ကို သုံးနာရီ(သို့)လေးနာရီခြားတစ်ခါ ပုံမှန်လဲပေးပါ။Pads ဟာ မကြာခဏလဲပေး သင့်ပါတယ်။Pad တစ်ခုတည်းကို အလုပ်ထဲမှာ တစ်နေကုန်သုံးတာ(မလဲပဲ ထားတာ)ဟာ ဗက်တီးရီးယားတွေကို ပေါက်ဖွားစေနိုင်ပြီး အနံ့အသက်ကိုလည်း ဆိုးရွားစေပါတယ်။ဒါကြောင့် အိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်း Pad ထုပ်အပိုဆောင်ပါ ။ပုံ မှန်လဲပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ကယ်ဆီယမ်ဟာ အမျိုးသမီးတွေ ရာသီလာချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ နာကျင်မှုေ တွကို သက်သာစေတယ်ဆိုပေမယ့် နို့၊ချိစ်၊ဒိန်ချဉ်အစရှိတာတွေကတော့ ဆန့် ကျင်ဘက်ပါ။အကြောင်းအရင်းကတော့ သူတို့မှာ arachadonic acids ပါလို့ပါ။အဲ့ဒီအက်ဆစ်က ဗိုက်အောင့်စေတတ်ပါတယ်။တကယ်လို့ ကယ် ဆီ ယမ်ဓါတ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့(non-dairy) နို့ထွက် ပစ္စည်းနဲ့ လုပ်ထား တာမဟုတ်တဲ့ အုန်းနို့ဒိန်ချဉ်လို အရာမျိုးကို သောက်လို့ရပါတယ်။
(၅)gym မသွားတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့
ရာသီလာချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ နာကျင်မှုတွေကြောင့် အမျိုးသမီး တော်ေ တာ် များများဟာ အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာ အိပ်ယာထဲလှဲနေတာ၊အိမ်ထဲမှာနေငြိမ် ငြိမ်ေ လးနေပြီး TV ကြည့်နေလေ့ရှိပါတယ်။တကယ့်တော့ ဒါဟာ မှားပါတယ်။ဒီလိုအ ချိန်မှာ gym ကိုပိုလို့တောင်သွားသင့်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းဟာ ရာသီလာချိန် မှာခံစားရတဲ့ ဗိုက်အောင့်တဲ့ ဝေဒနာ၊တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းနာကျင်ကို က်ခဲမှုတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
ရာသီလာနေတဲ့ အချိန်မှာ ရှောင်သင့်တဲ့ အရာတွေထဲမှာ အဖြူ ရောင်ဘောင်း ဘီလည်း ပါပါတယ်။အဖြူရောင်က စွန်းထင်းရင် အရမ်းကို သိသာလွန်းတဲ့အ တွက်ပါ။ဒီလိုအချိန်မှာ တက်နိုင်သမျှအရောင်ဖျော့ဝတ်တာတွေကို ရှောင်ပါ။
(၇)pad မခံပဲ အိပ်ယာဝင်တာ
ညဖက်အိမ်မှာမို့ Pad မခံပဲ ဒီအတိုင်း အိပ်ယာဝင်တာမျိုး ဘယ်တော့ မှ မလုပ် ပါနဲ့။သင့်ရဲ့စောင်၊မွေ့ယာတွေကို ညစ်ပတ်စေပါတယ်။ပုံမှန်သုံးနေကျ pad ကိုခံအိပ်ရတာ အဆင်မပြေဘူး၊သက်သောင့်သက်သာမရှိဘူးဆိုရင် အခုေ နာက်ပိုင်းမှာ day သုံးနဲ့ Night သုံးဆိုပြီး သီးသန့်ထုတ်ထားတာတွေရှိပါ တယ်။အဲ့ဒီထဲက Night သုံးကို စမ်းသပ် ရွေးချယ် အသုံးပြုကြည့်ပါ။
ရာသီလာချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ (Estrogen)ပမာဏ လျော့နည်း သွား တာကြောင့် တခြားပုံမှန်အချိန်တွေထက် နာကျင်မှုဝေဒနာကို ပိုခံစားရတတ် ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီလိုအချိန်တွေမှာ အမွှေးနုတ်တာတွေ ကို ရှောင်ပါ။
အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာ ရာသီလာခါနီးရင် စိတ်ခံစားမှုက သိသိ သာ သာသာ ပြောင်းလဲနေတတ်ပါတယ်။ခံစားလွယ်၊စိတ်တိုလွယ်နေပါတယ်။ပျော်ခြင်း၊ဝမ်းနည်းခြင်း၊ဒေါသထွက်ခြင်း၊စိတ်မလုံခြုံမှု စတဲ့ ခံစားချက်တွေကို အချိန် ခဏလေးအတွင်းမှာ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခံစားနေရတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာ စိတ်ခံစားချက်တွေက အမြင့်ဆုံးရောက်နေ၊ခံစားလွယ်နေတတ်တာကြောင့် ဝမ်းနည်းစရာ ရုပ်ရှင်တွေကို လုံးဝမကြည့်ပါနဲ့။
စိတျ မကောငျးစရာပါ။ မိနျးကလေးမြား အထူး သတိ ရှိကွပါ …
ရာသီ လာခြိနျ အစစ အရာရာ ဂရုစိုကျပါ
ရာသီလာ ခြိနျခေါငျး မလြှျော ပါနဲ့ ရာသီလာခြိနျ ရခေဲရေ လုံးဝ မသုံးပါနဲ့
ငရုပျသီး အစပျ လုံးဝမစား ပါနဲ့. ရာသီသှေး သညျ 3ရကျတိတိ သူ့အစဉျလာတိုငျး လာပါတယျ
အစပျ စားလှ ငျြ ပုံမှနျထကျ သှေး ပိုဆငျးသညျ
ရာသီ လာခါနီး ရခြေိူးခေါငျးလြှျော ဆငျခွငျကွပါ မိနျးကလေးမြား
ရာသီလာခြိနျမှာ မလုပျ သငျ့တဲ့ အရာတှေ၊ ဆောငျရနျရှောငျရနျတှရှေိပါ တယျ။ မကွာသေးမီက လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ လုံးဝမလုပျသငျ့တဲ့ ရှောငျရမယျ့ အခကျြတှကေိုတှခေဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီလိုအခြိနျတှမှော ဆိုရငျ ပုံမှနျအခြိနျတှထေကျ အာရုံစူးစိုကျနိုငျစှမျးေ လြာ့နညျးနတေကျပါတယျ။ရှောငျရမယျ့ အခကျြတှေ ကတော့…
အဲ့ဒီလိုအခြိနျတှမှော စိတျတိုလှယျ၊ စိတျဆတျလှယျနတောကွောငျ့ အဲ့ဒီလို အခြိ နျတှမှော တတျနိုငျသမြှ စကားပွောဆငျခွငျပါ။မိသားစု၊ကိုယျ့ရဲ့ ပါတာနာ ကို တဈယောကျတညျးအေးအေးနေ ခငျြကွောငျး ပွောပွထားပါ။ လမျးလြှောကျတာ တို့၊စာအုပျဖတျနတောတို့ လုပျပါ။
ဒီလိုအခြိနျမှာ ငနျတဲ့ Snacks တှေ ဥပမာ-အငနျပါတဲ့ အာလူးခြောငျးကွျော လို အရာတှကေိုရှောငျပါ။ရာသီလာနတေဲ့ အခြိနျမှာ အငနျပါတဲ့ အစားအစာတှကေို လုံးဝရှောငျကဉျြသငျ့ပါတယျ။ဒါကွောငျ့ Snacks လိုအရာတှကေို စားမယျ့အစား သဈသီး၊အသီးအရှကျအစရှိတာတှကေို စားသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။ ဒီလိုအခြိနျမှာ လိုအပျနတေဲ့ Minerals(သတ်တုဓါတျ)နဲ့ဗီတာမငျတှကေို သဈသီးဝလံနဲ့အသီး အရှကျတှကေသာ ပေးစှမျးနိုငျမှာပါ။
(၃)Pad ထုပျကို (၃)နာရီ(သို့)(၄)နာရီ တဈခါလဲပါ
အိမျမှာပဲဖွဈစေ၊အလုပျမှာပဲဖွဈစေ ဘယျနရောပဲ ရောကျနနေေ Pad ထုပျကို သုံးနာရီ(သို့)လေးနာရီခွားတဈခါ ပုံမှနျလဲပေးပါ။Pads ဟာ မကွာခဏလဲပေး သငျ့ပါတယျ။Pad တဈခုတညျးကို အလုပျထဲမှာ တဈနကေုနျသုံးတာ(မလဲပဲ ထားတာ)ဟာ ဗကျတီးရီးယားတှကေို ပေါကျဖှားစနေိုငျပွီး အနံ့အသကျကိုလညျး ဆိုးရှားစပေါတယျ။ဒါကွောငျ့ အိတျထဲမှာအမွဲတမျး Pad ထုပျအပိုဆောငျပါ ။ပုံ မှနျလဲပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
ကယျဆီယမျဟာ အမြိုးသမီးတှေ ရာသီလာခြိနျမှာ ဖွဈတတျတဲ့ နာကငျြမှုေ တှကို သကျသာစတေယျဆိုပမေယျ့ နို့၊ခြိဈ၊ဒိနျခဉျြအစရှိတာတှကေတော့ ဆနျ့ ကငျြဘကျပါ။အကွောငျးအရငျးကတော့ သူတို့မှာ arachadonic acids ပါလို့ပါ။အဲ့ဒီအကျဆဈက ဗိုကျအောငျ့စတေတျပါတယျ။တကယျလို့ ကယျ ဆီ ယမျဓါတျလိုခငျြတယျဆိုရငျတော့(non-dairy) နို့ထှကျ ပစ်စညျးနဲ့ လုပျထား တာမဟုတျတဲ့ အုနျးနို့ဒိနျခဉျြလို အရာမြိုးကို သောကျလို့ရပါတယျ။
(၅)gym မသှားတာမြိုး မလုပျပါနဲ့
ရာသီလာခြိနျမှာ ဖွဈပျေါတတျတဲ့ နာကငျြမှုတှကွေောငျ့ အမြိုးသမီး တျောေ တျာ မြားမြားဟာ အဲ့ဒီလိုအခြိနျတှမှော အိပျယာထဲလှဲနတော၊အိမျထဲမှာနငွေိမျ ငွိမျေ လးနပွေီး TV ကွညျ့နလေရှေိ့ပါတယျ။တကယျ့တော့ ဒါဟာ မှားပါတယျ။ဒီလိုအ ခြိနျမှာ gym ကိုပိုလို့တောငျသှားသငျ့ပါတယျ။လကေ့ငျြ့ခနျးဟာ ရာသီလာခြိနျ မှာခံစားရတဲ့ ဗိုကျအောငျ့တဲ့ ဝဒေနာ၊တခွားခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးနာကငျြကို ကျခဲမှုတှကေို သကျသာစပေါတယျ။
ရာသီလာနတေဲ့ အခြိနျမှာ ရှောငျသငျ့တဲ့ အရာတှထေဲမှာ အဖွူ ရောငျဘောငျး ဘီလညျး ပါပါတယျ။အဖွူရောငျက စှနျးထငျးရငျ အရမျးကို သိသာလှနျးတဲ့အ တှကျပါ။ဒီလိုအခြိနျမှာ တကျနိုငျသမြှအရောငျဖြော့ဝတျတာတှကေို ရှောငျပါ။
(၇)pad မခံပဲ အိပျယာဝငျတာ
ညဖကျအိမျမှာမို့ Pad မခံပဲ ဒီအတိုငျး အိပျယာဝငျတာမြိုး ဘယျတော့ မှ မလုပျ ပါနဲ့။သငျ့ရဲ့စောငျ၊မှယေ့ာတှကေို ညဈပတျစပေါတယျ။ပုံမှနျသုံးနကြေ pad ကိုခံအိပျရတာ အဆငျမပွဘေူး၊သကျသောငျ့သကျသာမရှိဘူးဆိုရငျ အခုေ နာကျပိုငျးမှာ day သုံးနဲ့ Night သုံးဆိုပွီး သီးသနျ့ထုတျထားတာတှရှေိပါ တယျ။အဲ့ဒီထဲက Night သုံးကို စမျးသပျ ရှေးခယျြ အသုံးပွုကွညျ့ပါ။
ရာသီလာခြိနျမှာ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာရှိတဲ့ (Estrogen)ပမာဏ လြော့နညျး သှား တာကွောငျ့ တခွားပုံမှနျအခြိနျတှထေကျ နာကငျြမှုဝဒေနာကို ပိုခံစားရတတျ ပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ဒီလိုအခြိနျတှမှော အမှေးနုတျတာတှေ ကို ရှောငျပါ။
အမြိုးသမီးတျောတျောမြားမြားဟာ ရာသီလာခါနီးရငျ စိတျခံစားမှုက သိသိ သာ သာသာ ပွောငျးလဲနတေတျပါတယျ။ခံစားလှယျ၊စိတျတိုလှယျနပေါတယျ။ပြျောခွငျး၊ဝမျးနညျးခွငျး၊ဒေါသထှကျခွငျး၊စိတျမလုံခွုံမှု စတဲ့ ခံစားခကျြတှကေို အခြိနျ ခဏလေးအတှငျးမှာ အမြိုးမြိုးပွောငျးလဲခံစားနရေတတျပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုအခြိနျမှာ စိတျခံစားခကျြတှကေ အမွငျ့ဆုံးရောကျနေ၊ခံစားလှယျနတေတျတာကွောငျ့ ဝမျးနညျးစရာ ရုပျရှငျတှကေို လုံးဝမကွညျ့ပါနဲ့။
လူတိုင်း မှာ ကိုယ့်ကို စောင့်ရှောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်… မိမိကို ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ် စောင့်ရှောက်နေသလဲ သိချင်ရင် တွက်ကြည့်ပါ ဘယ် ပုဂ္ဂိုလ် စောင့်သလဲ….?
အရမျးကွိုကျ လို့ ကွီးပှား ကွောငျး ( ၇ ) ရပျ (မဖတျဘဲ နရေငျ နောငျတရ လိမျ့မယျ)
အိမျရှေ့ မှာ သတ်တာလေး တလုံးပျေါမှာ ထိုငျနလေို့ အခြိနျကွာလာတော့ ဘာဖွဈလို့လဲ ထှကျမေး ကွညျ့လိုကျသျောအခါ